Marriott Hotels malitere na West Africa site na imeghe Accra Marriott Hotel
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Marriott Hotels malitere na West Africa site na imeghe Accra Marriott Hotel
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Ghana • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ okomoko • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Marriott Hotels, akụkụ nke Marriott International, taa kwupụtara mpụta mbụ ya na West Africa, yana mmeghe mmeghe nke Accra Marriott Hotel. Ndi Africa Hospitality Limited nwere, otele di na uzo a di nso na Kotoka International Airport, na eme ya “Gateway to West Africa” zuru oke. Accra Marriott Hotel dị n’etiti ọdụ ụgbọ elu obodo, mmepe mmepe na-abawanye n’obodo, Accm Marriott Hotel dị naanị kilomita ole na ole na mpụga mpaghara azụmahịa etiti obodo na-enye ndị isi ụlọ ọrụ azụmaahịa, ụlọ ọrụ gọọmentị na ama ama ama ama ama ama ama ama.
"Obi dị anyị ụtọ imeghe Accra Marriott Hotel, nke a na-atụ anya nke ọma na pọtụfoliyo Afrika anyị na ihe dị ịrịba ama na njem anyị" kwuru Alex Kyriakidis, Onye isi ala na onye isi njikwa, Middle East na Africa, Marriott International. “Accra bu otiti obi nke Ghana, obodo di omimi juputara n’ike. Azụmaahịa, nrụpụta, na ụlọ ọrụ nkwukọrịta nwere nnukwu ụlọ ahịa yana ndụ abalị dị mma, ọ na-eme njem njem na-atọ ụtọ maka azụmahịa na maka ezumike. Ralọ oriri na ọ willụraụ Accra Marriott ga-agbakwunye ọbịbịa ile ọbịa nke obodo ahụ, na-akpali ndị ọbịa nwere ahụmịhe na-eche echiche n'ihu na oghere ndị na-akpali akpali nke na-agwa ụdị echiche ha. ”
Na ụlọ 208 a họpụtara nke ọma, ebe iri nri atọ na-adọrọ adọrọ, mita 3 nke oghere nzukọ, ọdọ mmiri na ebe a na-edozi ahụ nke ọma, Accra Marriott Hotel na-enye ụlọ ọrụ azụmaahịa ọgbara ọhụrụ. Ọdịdị nke oge a na ihe ndị metụtara mpaghara na-agwakọta iji mepụta ọmarịcha mma dị egwu. Ime ụlọ ndị ọbịa jupụtara na Amenity, iri nri na-aga n'ihu, teknụzụ mbelata, ụlọ nzukọ na-agbanwe agbanwe ma bụrụkwa ihe atụ na ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ na-eme ka ọbịa ọ bụla nọrọ iche, ebe oghere ọhụụ, dị ka The Greatroom, na-enye ndị ọbịa ohere ịgwakọta ọrụ na egwu. Oge a na ọkaibe na usoro ya, na-enye ahụmịhe nke na-eme ka uche nwee echiche ziri ezi, dị nkọ ma bụrụ nke mmụọ nsọ, ụlọ nkwari akụ bụ ebe kachasị mma maka ndị njem ịme azụmahịa ha ma ọ bụ chọpụta obodo na-ekwo ekwo nke Accra.
Obi ike na-agbanwe onwe ya maka ndị njem mkpanaka na nke ụwa, Marriott Hotels na-akpali nghọta na-eduga ụlọ ọrụ na ihe ọhụụ. Na Marriott Accra Hotel, ndị ọbịa nwere ike ịnweta ịdị mfe nke nlele mkpanaka ma nwee ọmalị ahụmịị nke ndị ọbịa site na Mobile Guest Services, na-enweghị nke ejiri ọrụ Marriott Hotels a ma ama n'ụwa niile.